अनेक प्रकारका मधुमेहका कारकतत्त्व, जोखिम र समाधान – Health Post Nepal
अनेक प्रकारका मधुमेहका कारकतत्त्व, जोखिम र समाधान
२०७६ जेठ ११ गते १६:२८
मधुमेह भनेको रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक बढ्ने समस्या हो । प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन राम्रोसँगै उत्पादन गर्न नसक्दा, नगर्दा वा उत्पादित इन्सुलिन राम्रोसँग उपयोग गर्न नसक्दा मधुमेह हुने गर्छ ।
ग्लुकोजचाहिँ कहाँबाट आउँछ ?
ग्लुकोज सामान्यतया हामीले खाएको कार्बोहाइड्रेट तत्वलाई पाचन प्रणालीले पचाउने काम गर्दा तयार हुन्छ र हाम्रो कलेजोले पनि यसलाई उत्पादन गर्छ । कार्बोहाइडे«ट हामीले खाने विविध खान, जस्तै, रोटी, आलु, मकै, फलफूल तथा दुग्धजन्य पदार्थ र गुलिया खानेकुराबाट प्राप्त हुन्छ । प्रोटिन पनि ग्लुकोजमा परिणत हुन सक्छ ।
टाइप १ : प्याङ्क्रियाजमा रहेका इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कोषिकाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्न सक्दैन । त्यसपछि टाइप १ मधुमेह हुने गर्छ । यसको मुख्य कारणमा शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक शक्तिमा गडबडी आउनु हो । यो रोग सामान्यतया बालबालिकामा धेरै पाइन्छ । यसप्रकारको मधुमेहबाट बच्ने उपाय छैन । यसलाई इन्सुलिनको सुई दिएर मात्रै उपचार गर्न सकिन्छ ।
टाइप २ : यसप्रकारको मधुमेह या त प्याङ्क्रियाजले शरीरलाई आवश्यक मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न नसकेर या उत्पादित इन्सुलिनले काम गर्न नसकेर हुने गर्छ । यो सबैभन्दा बढी प्रचलित प्रकारको मधुमेह हो । मधुमेहका ९० प्रतिशत बिरामी टाइप २ महुमेहबाटा पीडित भएको पाइन्छ । यसप्रकारको मधुमेह नियन्त्रणमा औषधिका साथसाथै इन्सुलिनको प्रयोग, जीवनशैलीमा परिवर्तन, स्वस्थकर र सन्तुलित भोजन, शारीरिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्दै शारीरिक तौल कम गर्नेजस्ता कार्य गर्दा नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।
गर्भावस्थामा हुने मधुमेह : त्यस्ता महिला, जसमा पहिले कहिल्यै मधुमेह देखापरेको थिएन, तर गर्भावस्थामा देखापर्यो भने त्यसलाई गर्भावस्थामा हुने मधुमेह भनिन्छ । यसप्रकारको मधुमेह सामान्यतया गर्भावस्थाको पछिल्लो समयमा देखापर्छ । यसलाई इन्सुलिनको प्रयोगबाट उपचार गरिन्छ र महिला सुत्केरी भइसकेपछि त्यो आफैँ ठिक भएर जान पनि सक्छ । तर, गर्भावस्थाको मधुमेह भएका महिलामा समान्य महिलाको दाँजोमा ३५ देखि ६० प्रतिशतसम्म टाइप २ मधुमेह हुने खतरा बढी रहन्छ ।
अन्य सहायक मधुमेह : यसखाले मधुमेह अन्य कारणहरू, जस्तै, शरीरमा हर्मोनको मात्रामा गडबडी आएर, वंशानुगत कारणले, केही रसायन तथा औषधिका कारणसमेत हुन सक्छ । शरीरमा प्रभाव पार्ने जटिल वा कडाखालका रोग, प्याङ्क्रियाजसम्बन्धी रोग, मद्यपान र कुपोषणका कारणसमेत यसखाले मधुमेह हुन सक्छ । यदि मुख्य रोगको सफतापूर्वक उपचार गर्ने हो भने यसखाले मधुमेह आफैँ कम भएर जान्छ ।
डायबेटिज र थाइराइड विशेषज्ञ (इन्डोक्राइनोलोजिस्ट) डा. श्रेष्ठ नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।